सांसद डा. सूर्य पाठकलाई बालुवा तस्करद्धारा धम्की::Online News Portal from State No. 4
सांसद डा. सूर्य पाठकलाई बालुवा तस्करद्धारा धम्की
जलजलाका व्यावसायी र जनप्रतिनिधि उनी विरुद्ध खनिएका छन् ।
बागलुङ, २४ भदौ – बागलुङ १ नम्वर क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद डा. सूर्य प्रसाद पाठकलाई बालुवा तस्करहरुले धम्की दिएका छन् ।कालीगण्डकीमा भएको बालुवा तस्करी बारे डा. पाठकले संसदका आवाज निकाले पछि बाग्लुङका बालुवा तस्कारहरु पाठक बिरुद्ध खनिएका हुन् ।पाठकले आफ्नो फेसबुक टाइमलाइन मार्फत आफु माफियाहरुसंग लड्दा कहिले ठेक्दार र कहिले बालुवा तस्कारले धम्कि दिएको वताएका छन् । पाठकले माफियाहरुले प्रहरी प्रशासन समते हातमा लिएको उल्लेख गरेका छन् । पाठकले आफ्नो सुरक्षाको बारेमा समेत खुलेर लेखेका छन् । उनले ‘म कहिलै प्रहरीसंग सुरक्षा माग्दिन, प्रहरी अघिपछि लागेर हिड्दिन्’ । पाठकले आफु मदन भण्डारीमो चेला भएको भन्दै मर्न परे हाँसेर मर्ने वताएका छन् ।
पाठकको फेसबुक स्टाटस
म ठूला माफिया र दलालहरुको बिरुद्द संसदमा आवाज सहित लडिरहेको छु। सडकमा भुरा माफियाहरुसंग लडिरहेको छु। कहिले मलाई ठेक्दारले मुद्धा हाल्छु भन्छन कहिले बालुवा तस्करले धम्कि दिन्छ्न । म मदन भण्डारीको चेला हुँ । (म आमाले जन्माउदा च्याय गरेर रोएर आएको हुँ) मर्दा हाँसेर मर्छु । म कहिलै प्रहरीसंग सुरक्षा माग्दिन , प्रहरी अघि पछि लागेर हिड्दिन । बाग्लुङका चोकचोकमा एक्लै हिड्छु । मैले जिवनको जोखिम मोलेर राजनितिमा आएको हो । माफियाहरु जे सक्छौ त्यही गर, प्रहरी प्रशासन पनि तिमिहरुले नै किनेका छौ । जहाँ तिमिहरुको बोल बलाउछ।
कालीगण्डकी नदि उत्खनन्लाई व्यवस्थित बनाउन पाठकले आवाज उठाएपछि पर्वतको जलजलाका व्यावसायी र जनप्रतिनिधि उनी विरुद्ध खनिएका छन् । सांसद पाठकले प्रतिनिधिसभा र केहि सञ्चार माध्यममा नदि उत्खननन्को विषयलाई लिएर अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पाठकको बिरोध भएको हो ।
यस अघि गाउँपालिकाले भदौ १५ सम्म उत्खनन् गर्न रोकेको भएपनि साउन अन्तिमबाटै ठाउँठाउँमा बालुवाका पहाड उठेका थिए । सांसद पाठकले कालीगण्डकीको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी मध्यरातमा डोजर र स्काभेटर लगाएर दोहन भैरहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका थिए । उक्त समाचारपछि जिल्लामा रहेको अनुगमन समितिले पनि अनुगमन गरेको थियो । तर अनुगमन समिति हात्तिको देखाउने दाँतजस्तै बनेको सरोकारवालाहरुको आरोप रहेको छ ।